Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Echetara ọtụtụ nde ngwa nyocha ụlọ COVID-19 na USA
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ihe dị ka ngwa 2,212,335 nke ụlọ ọrụ biotech nke Australia Ellume mepụtara ma kesaa na US nwere ike igosi nsonaazụ nnwale SARS-CoV-2 ụgha.
Nchịkwa nri na ọgwụ gọọmentị etiti US na-ewepụta ncheta ngwa ngwa nke ngwa nnwale ụlọ COVID-19 adịghị mma.
Ngwa nnwale ụlọ echetere gosipụtara nsonaazụ COVID-19 adịgboroja 'dị elu karịa nke anabatara'.
Nnwale ahụ nke na-achọpụta protein coronavirus, FDA nyere ikike maka ojiji mberede n'afọ gara aga.
'Klas m chetara' maka ọtụtụ nde ndị na-ewu ewu ngwa ngwa Ngwa nyocha ụlọ COVID-19 Ụlọọrụ US Federal Food and Drug Administration (FDA) enyela ya.
Dabere na FDA, 'ụdị ncheta kacha njọ' ka ewepụtara n'ihi ngwa nyocha 2,212,335 COVID-19 nke ụlọ ọrụ biotech sitere na Australia mepụtara. Ellum, ma kesaa na US, gosi nsonaazụ nnwale SARS-CoV-2 ụgha 'dị elu karịa nke anabatara'.
Onye na-ahụ maka gọọmentị etiti US dọrọ aka ná ntị na iji ngwa ndị na-adịghị mma “nwere ike ịkpata ajọ nsonaazụ ahụike ma ọ bụ ọnwụ.”
Nnwale antigen, nke na-achọpụta protein coronavirus, ka FDA nyere ikike maka ojiji mberede n'afọ gara aga. Ọ dị na-enweghị ndenye ọgwụ maka ma ndị okenye na ụmụaka ndị gbara afọ abụọ na karịa, ma na-eji nlele swab ewepụtara na imi iji chọpụta ma mmadụ nwere COVID-19.
A na-echeta ụfọdụ "nza akọwapụtara," nke arụpụtara n'etiti February na Ọgọst afọ a na US ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ na-ekwu na ya na ndị ọchịchị na-arụkọ ọrụ iji wepụta onwe ha wepụ ule ndị emetụtara n'ahịa.
Ụlọ ọrụ ahụ arịọla mgbaghara ya "maka nrụgide ọ bụla ma ọ bụ ihe isi ike [ndị ahịa] nwere ike inwe n'ihi nsonaazụ dị mma nke ụgha."
Nsonaazụ ụgha 'dị elu karịa nke a na-anabata', na-egosi na mmadụ nwere coronavirus mgbe n'eziokwu ha enweghị, akọọrọla FDA na opekata mpe 35. Ọnweghị nsonaazụ ọjọọ adịgboroja ahụrụ.
Agbanyeghị, nchọpụta na-ezighi ezi nwere ike ibute nsonaazụ na-eyi ndụ egwu. Mmadụ nwere ike nweta ọgwụgwọ na-ezighi ezi ma ọ bụ nke na-adịghị mkpa, gụnyere ọgwụ mgbochi nje na ọgwụgwọ anụ ahụ, ma nwee mmerụ ahụ ọzọ n'ihi ịnọpụ iche na ndị òtù ezinụlọ na ndị enyi ya.
Ọ nwekwara ike iduga ndị mmadụ na-eleghara nlezianya anya, gụnyere ịgba ọgwụ mgbochi megide COVID-19, FDA kwuru.